အီ စိမ့်ချို မြိန် လှ ပါ တယ် မောင် ရယ် – Grab Love Story
ည… အားလုံးတိတ်ဆိတ်၍နေသည်။ ခင်ဖုဏ်းသည်မျက်လုံးကြောင်၍နေ၏။ အိပ်မရသော်အကြောင်းအရင်းကလည်း ရှိနေသည်မဟုတ်ပါလား…… ကိုယ့်အပေါ်မှာလည်း တာဝန်တစ်ခုရှိနေပြီကော….. သေချာပါသည်….. သို.သော် ထိုတာဝန်သည် လူသိရှင်ကြားမဖြစ်စကောင်းသောတာဝန်…. အစ်မတော် စောကလျာ ပေးအပ်ထားသောအထူးတာဝန်ဟုဆိုရမည်။
ခင်ဖုဏ်းသည်စင်စစ် ကျေးတောသူမလေးသာဖြစ်၏။ အားလုံးကို ခင်ဖုဏ်းကြောက်ပါသည်၊ လေးစားရပါသည်၊ ထိုင်ဆိုထိုင်၊ ထဆိုထရသောခင်ဖုဏ်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သို.ဖြစ်စေကာမူ ခင်ဖုဏ်းတစ်ယောက် မိမိဘဝကိုမိမိကျေနပ်ပါသည်။ ခင်ဖုဏ်း၏ရုပ်ရည်ကား တောနှင့်မတန်လေသောကြောင့်လားမသိ၊ သို.တည်းမဟုတ် နန်းထိုက်လေသောကြောင့်လေလားမသိ၊ မမျှော်မှန်းရဲသော ရွှေနန်းတော်အရပ်ဆီသို.ရောက်ခဲ.ရပါပြီ။
ဒူ..ဒူ..ဒူ..ဒူ တစ်ချက်ခြင်းတီးခတ်လိုက်သော ရွှေဗဟိုရ်စည် သံကိုနားစွင့်မိတော့ (၁၀) ချက်တောင်တီးပြီကော…….. ခင်ဖုဏ်းသည်အိပ်ရာမှ လူးလဲထကာတံခါးကိုအသာဖွင့်၍ထွက်ခဲ့၏။ ထို.နောက် မမစောကလျာ ရှိသောအဆောင်ဖက်ဆီသို. အရွေ.ရွေ.ချဉ်းကပ်ကာသွားနေ၏။ ရှမ်းပြည်မှကြွရောက်လာသည့် ယခုတလော နိူင်ငံတော်ပြည်အရေးကလည်း ကောင်းလှသည်မဟုတ်….. ဘဝရှင်မင်းတြားကြီး၏ ကျန်းမာရေးကလည်းမကောင်း….. အစွမ်းထက်သောတောကြောင်တို.ကလည်း ပုန်ကန်ထြွသည်မျှအထိတော့ခင်ဖုဏ်းသိထား၏ြွသို.သော် သည်ကိစ်္စ ခင်ဖုဏ်းနှင့်မဆိုင်ပါ။
ခင်ဖုဏ်းအနေနှင့် သည်ရွှေနန်းတော်ကြီးအတွင်းမှာ ကိုယ့်ကိုချီးမြှင့်မြှောက်စားသူတို. အငြိုညင်မခံရဖို.သာဖြစ်သည်။ ခင်ဖုဏ်းသည် အမှောင်ကိုတိုးလျှက် မမ၏အဆောင်တော်သို. တရွေ.ရွေ.ချဉ်းကပ်ခဲ.၏။ ထိုစဉ်….. ခင်ဖုဏ်းကိုယ်အား သန်မာသောလက်ချောင်းများ၏ဆုပ်ကိုင်သိမ်းပိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရ၏။ မင်း…..ဘယ်သူလဲ……. ထိုသူက ခင်ဖုဏ်း၏ရင်ဝသို. ဓါးမြှောင်ကိုရင်ဝသို.ချိန်ရွယ်ရင်းမေးလိုက်၏။ ခင်ဖုဏ်း ရင်ထိတ်လိုက်သည်မှာ အသားများပင်တုန်လို…. အသံထွက်ဖို.ဆိုသည်မှာ ဝေလာဝေး…… ပြော…မင်းဘယ်သူလဲ….. ထိုသူက နေရာရွှေ.၍ ထပ်မံဖြစ်ညှစ်လိုက်သောအခါ ခင်ဖုဏ်း၏ ရွှေရင်အစုံကိုဖိမိလျက်သားဖြစ်သွားရသည်။
ထိုသူ၏လက်အစုံသည် ခင်ဖုဏ်းထံမှ ရုတ်ချည်းဖယ်ခွါသွားပြီးနောက် လရောင်မှိန်မှိန်၌ ခင်ဖုဏ်းမျက်နှာကို အနီးကပ်ကြည့်ရင်း…. ဟင်…လုံမပျိုပါလား…. မင်းနာမည် ဘယ်သူလဲ…. ညအချိန်မတော်ကြီးထွက်လာပုံထောက်တော့ မင်းသူလျှိုလား…. ထိုကဲ.သို.မေးပြီးနောက် ခင်ဖုဏ်းဆီမှအဖြေမရသဖြင့် ခင်ဖုဏ်း၏ကိုယ်ကို ခါးမှပိုင်နိူင်စွာမကာ မလှမ်းမကမ်းရှိပန်းရုံအောက်သို.ခွေားလေ၏။ တစ်ဆက်တည်းပင် ခင်ဖုဏ်း၏ကိုယ်လုံးအနှံ.၌ လက်နက် (သို.မဟုတ်) စာချွန်တော် ပါ မပါ ရှာဖွေလေ၏။ သူ၏လက်များသည် ကြမ်းတမ်းပြီး နွေးထွေးနေသည်ဟု ခင်ဖုဏ်းထင်၏။ အထူးသဖြင့် ခင်ဖုဏ်း၏ ရွှေရင်နှစ်မွှာ၊ တင်ပါးအကွဲနှစ်ခုအကြားအထိစေ့စေ့ပေါက်ပေါက်ရှာ၏။
အာဂရဲမက်ပါတကား…….. ယခုအချိန်ထိ ခင်ဖုဏ်းစကားတစ်ခွန်းမှမဆိုရဲသေး….. သူကလည်းထပ်တလဲလဲ မေးနေ၏။ ခင်ဖုဏ်းသာအမှန်ကိုထွက်ဆိုလျှင် မိမိသာမက မမစောကလျာ၏ ဂုဏ်ရည်တော်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါလော…. ရဲမက်ဆီမှသေရည်နံ.ကို စိတ်ညစ်ညူးဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ခင်ဖုဏ်းရနေ၏။ သူသတ်လျှင်လည်း သေလိုက်ရုံပ… ခင်ဖုဏ်း ထိုသို.ပင်ခံယူထား၏။ သို.သော်ရဲမက်သည် ခင်ဖုဏ်း၏ ရင်လွှမ်းကိုယ်ဝတ်ကို သာ ဓဗျိဓကနဲ ဆောင့်ဆွဲလိုက်၏။ စုတ်ပြဲသွားသော ရင်လွှမ်းအဝတ်ကလည်း ညဝတ်အပါးစားပေမို. သူ.လက်ထဲ၌ နုကာ၊အိကာ နေမည်ပ……. ခင်ဖုဏ်းစကားတစ်ခွန်းမှ မဆိုလေသည်ကို စိတ်မရှည်ပြီထင့် ခင်ဖုဏ်း၏ကိုယ်ကို ကိုင်လှုပ်လျှက်သား တသွင်သွင်မေးရင်းမှ ရင်ဝတ်အလွှမ်းကို ထပ်မံဆုတ်ဆွဲခြင်းကိုခံလိုက်ရ၏။
အတွင်းခံရင်စည်းသဘက်ကို မဝတ်ခဲ့သည်မို. ဝိုင်းစက်အိမို.နေသော ခင်ဖုဏ်း၏ရင်သားနှစ်ဖက်မှ ဗလာကျင်းခဲ.ရပြီတည်း…. တာဝန်သည် တာဝန်သာဖြစ်သည်။ ယခုကိစ်္စသည်ကား သွေးသားကိစ်္စ… ရဲမက်သည် ခင်ဖုဏ်း၏ရွှေရင်အစုံကို နယ်ကာ လှိမ့်ကာဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေ၏။ ခင်ဖုဏ်းအနည်းငယ်အကြောက်ပြေသွားသည်… ယနေ.ညအဖို.တော့ ခင်ဖုဏ်းမသေနိူင်သေး…. ရဲမက်သည်ကား အာခေါင်တွေခြောက်ကာ ရင်ပူလာဟန်ရှိ၏။
တစစဖြင့် အသက်ရှုသံမှာလည်း မြန်လာ၏။ အပေါင်းအသင်းတို.၏ ဇွတ်တရွတ်တိုက်တွန်းမှုဖြင့် သောက်သုံးမိသည့် ယစ်ရွှေရည်ကလည်းတန်ခိုးပြလာပြီထင့် ရင်ခွင်တွင်းသို.ရောက်နေသော မိန်းကလေးကို အဓ်္ဓမပင်ပွေ.ဖက်လိုက်ကာ သူမ၏ရင်သားအစုံကို လူးလှိမ့်ဆုတ်နယ်ပေးနေ၏၊ သေချာသည်ကား လုံမငယ်သည် အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခံခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပေ။ သူမသည် လျှို.ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြင့် ဤနေရာသို. ရောက်ခွဲသည်မှာသေချာ၏။
ကင်းတာဝန်ကျရဲမက်တို.သည်လည်းသေရည်လွန်ကာ အိပ်မောကျကုန်ကြပေပြီ။ ဤပန်းရုံအောက်၌ မိမိနှင့်သူမနှစ်ဦးတည်းသာ…ရဲမက်သည် ပစ်္စက်္ခအခြေအနေကို ကျေနပ်သွားကာ စနေတစ်ခိုင်ကို ပါးစပ်ဖြင့်ငုံလိုက်ရင်း လက်တစ်ဖက်က သူငယ်မ ခါးတစ်ဖက်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ကာ ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ခါးစည်းအဝတ်ကိုဖြေလျော့လိုက်ရာ သူငယ်မ၏အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဗလာကျင်းသွား၏။ အို…မောင်ကြီး….. ပထမဦးဆုံးထွက်လာသော စကားသံဖြစ်၏။ ရဲမက်က ခင်ဖုဏ်းတစ်ကိုယ်လုံးစွေ.ကနဲပွေ.ချီကာ ပန်းရုံ၏တစ်ဖက်ရှိ တန်းလျားခုံတန်းဆီသို.သွား၏။ သူ.ကိုယ်ထက်၌ ခင်ဖုဏ်းအား သူငယ်ပွေ. ပွေ.ကာ အငမ်းမရနမ်းရှိုက်လေတော့သည်။
ရဲမက်ကနမ်းလျှက်သားပင် သူမ၏ အိစက်သွယ်ပျောင်းသော ဆင်စွယ်ပမာ ပေါင်လုံးအစုံကို စုန်ချည်ဆန်ချည် ရွရွလေးပွတ်သပ်နေပြန်သည်…. ခင်ဖုဏ်း ယားလှပါတယ်မောင်ကြီး……… စိတ်ထဲမှာသာ မြည်တမ်းတမိ၏…… သူ.လက်ကြမ်းကြမ်းကြီးတွေက ခင်ဖုဏ်းပေါင်ရင်းခွဆုံမှာအဆုံးသတ်သွား၏။ ခင်ဖုဏ်းပေါင်နှစ်လုံးကိုတင်းတင်းစေ့ထားပါသော်လည်း ရဲမက်ကသူ၏လက်ဝါးစောင်းကို သံလျက်ပမာပြုပြီး ထိုးခွဲနေ၏။
ထို.နောက်တွင်ကား မသိမသာ တစတစ ကွာဟသွားသော ခင်ဖုဏ်း၏ပေါင်ရင်ခွဆုံကို မွမွကလေးပွတ်သပ်နေပြန်၏။ ခင်ဖုဏ်း၏ အိစက်တင်းကားလှသော တင်သားကြီးနှစ်ခုလည်း ဘယ်ညာ လူးရပါသည်။ ရဲမက်သည် ခင်ဖုဏ်း၏ အပျိုစင်ရတနာ လေးကို လက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ခပ်သွက်သွက် ကလိလိုက်ရာ စိုစွတ်သောအရည်ကြည်တို.ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် လက်နှစ်ဆစ်စာမျှအတွင်းသို.ဝင်သွားလေ၏။
ယားလှပါတယ်ရှင်… လွှတ်ပါမောင်ကြီးရယ်…. ရဲမက်သည်ကား ဘာကိုမှဂရုပြူဟန်မပြပါ… ခင်ဖုဏ်း၏စုတ်ပြဲသွားသော အပေါ်ဝတ်ကို ခပ်မြန်မြန်ဆွဲချလိုက်ကာ ခင်ဖုဏ်းကို ခုံရှည်ပေါ်အလျားလိုက်ချလိုက်၏။ ထို.နောက်သူ၏အဝတ်ကို ပင့်လှန်ကာချွတ်လိုက်သည်ကို လရောင်မှောင်မှောင်အောက်၌မြင်လိုက်ရ၏။ ရဲမက်သည် ခင်ဖုဏ်း၏ကိုယ်ကို လက်နောက်ပြစ်ပြီးထောက်ထားသောပုံစံသို.ဖြစ်အောင်ပြုပြ င်လိုက်၏။
ခင်ဖုဏ်း၏ ဒူးနှစ်ဖက်သည် အမောဖြေနေသော အဖိုးအိုတစ်ဦးပမာ ကွေးကွေးလေးထောက်လျှက်အနေအထားဖြစ်ကာ.. တန်းလျှားခုံကအတန်ငယ်မြင့်လေသည်မို. သူကခါးကိုင်းပြီး ခင်ဖုဏ်းအနောက်တည့်တည့်က ရပ်လေသောအခါ သူ၏ယောင်္ကျားတန်ဆာနှင့် ခင်ဖုဏ်း၏ ရတနာရွှေစင်ကလေး တည့်တည့်ကြီးရင်ဆိုင်တွေ.ကြပြီပကော… မြန်ဆန်သွက်လက်လှသည့် ရဲမက်ပါတကားဟု ခင်ဖုဏ်းတွေးနေစဉ်မှာပင် ရဲမက်က ခင်ဖုဏ်း၏ပေါင်ရင်းကို စိတ်ကြိုက်ထိတွေ.ပွတ်သပ်ကာ သူ၏ထိပ်ဖူးနှင့် သူမ၏ ခပ်နုနုရတနာပန်းပွင့်အဝကို အတည့်ချိန်ကာ သွတ်သွင်းလိုက်၏။
လက်သုံးဆစ်ခန်. စွိ ကနဲဝင်သွားသည်ဟု ခင်ဖုဏ်းစိတ်ထဲကသိလိုက်၏။ အာ.လာ.လာ. အမေ့.. နှစ်မငယ် နာကျင်သွားစ….. ရဲမက်ကမေး၏။ ခင်ဖုဏ်းပြန်မဖြေနိူင်ပါ အင့်.အင်း.အ..အ… ဟုကြိတ်၍သာငြီးတွားနေမိ၏။ သူ၏ထိပ်ဖူးကိုဆက်၍မသွင်းသေးသမို.သာ တော်တော့သည်။ နို.မဟုတ်ပါက ခင်ဖုဏ်းပန်းပွင့်လေးကွဲသွားမည်ထင်၏။ ရဲမက် ခြေတစ်လှမ်းနောက်ဆုတ်ပြီး ထိပ်ဖူးကိုအသာလေးနှုတ်လိုက်၏။ တစ်ဖန်ရှေ.သို.ဆက်ပြီးသွင်းပြန်ပါ၏။ စောစောကထက်ပိုပြီးဝင်သွားသော်လည်း သူ.ဟာကြီးက အကုန်ဝင်သေးဟန်မတူပါ။ အင်း….ဟင်းဟင်…ကျွတ်ကျွတ်….မယ်မယ်ဖုရား… ဟုငြီးမိ၏။
သိပ်နာနေသလား နှစ်မငယ်…..ဟုဆိုကာ ရဲမက်က တစ်ကျော့ပြန် နောက်ဆုတ်ပေးရှာပါသည်။ ပြလွတ် ဟုအသံမြည်ကာ သူ.ပစ်္စည်းကြီး ကျွတ်ထွက်သွားသည်မို. ခင်ဖုဏ်းရင်ထဲ ဟာတာတာ ဖြစ်ကာကျန်ခဲ.ရ၏။ နှစ်မကဖိုသတ်္တ ဝါနဲ.အတွေ.မရှိခဲ.သေးဘူးထင်ပါ့…. နာနေမှာပေါ့… ကိုင်း လာ လာ….ဟုဆိုကာ ခင်ဖုဏ်းအားပွေ.ချီလျက် အနီးရှိမြက်ခင်းပေါ်သို့ အသာအယာချလိုက်လေ၏။ တစ်ဖန် ရဲမက်သည် သူ၏ခါးဝတ်ပုဆိုးကိုဖြန်.ခင်း၍ ခင်ဖုဏ်းအားလှဲသိပ်လိုက်လေသည်။ ခင်ဖုဏ်းပက်လက်အနေအထားဖြစ်သွားသောအခါ ဒူးနှစ်ဖက်အားထောင်စေ၍ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို.ဝင်ထိုင်လိုက်၏။ပြီးနောက် ရဲမက်သည် ခင်ဖုဏ်း၏နှုတ်ခမ်းးနှစ်လွှာအား စုတ်နမ်းလိုက်လေသည်။ ရင်ထဲလှိုက်ကနဲဖိုသွားကာ ခင်ဖုဏ်း၏ကိလေသာစိတ်တို.ပိုမိုပွင့်လန်းလာသလိုခံစားလိုက်ရ၏။
ရဲမက်သည် ခင်ဖုဏ်း၏ ဂုတ်သား၊ ရင်သားနှစ်မွှာ၊ ဝမ်းဗိုက်ပြင်သားတို.ကိုဆက်တိုက်ဆိုသလို လျှာဖြင့်ကလိပြီးသူ၏မေတ်္တာကိုပြလေ၏။ တစ်ဖန်ဆက်ပြီး ခင်ဖုဏ်း၏ ဆီးစပ်ကိုလျှာဖြင့်ကလိသော်ကား….. အို….မဟုတ်တာ….မောင်ကြီးဘုန်းလျော့ကုန်ပါ့မယ်… ဟု ခင်ဖုဏ်းဆိုလေသော် တဟဲဟဲ ဖြင့် ရွှေဘော်တော်ကျသွားကာ ခင်ဖုဏ်း၏ပေါင်နှစ်လုံးကို အနည်းငယ်ဟဖြဲလျက် သူ.ထိပ်ဖူးဖြင့် ပေါင်ရင်းဆုံရှိ လိုဏ်ခေါင်းဝသို. ဒုတိယအကြိမ် အောင်းရန်ကြံလေပြန်သည်။
နွေးထွေးနူးညံ့သောအတွေ.က ခွဆုံတွင် ဟိုထိဒီထိဖြင့် ခင်ဖုဏ်းခမျာ ယားကျိယားကျိဖြစ်ရပြန်သည်။ သူ.ထိပ်ဖူးက ခင်ဖုဏ်းကိုချော်၍ချော်၍ထိနေ၏၊ သူသိပ်မူးနေလို.လား မသိတတ်ပြီ…ခင်ဖုဏ်းကလက်ဖြင့် သူ.ထိပ်ဖူးကို ဖတ်ကနဲရှာဖွေဆုပ်ကိုင်ကာ သူမ၏ဝတ်မှုံအစု တည်ရာ နှုတ်ခမ်းသားအဝနှင့် တေ့ဆိုင်ပေးလိုက်သောအခါ ဓပြွတ်ဓ ကနဲတစ်ချက်အသံပေးပြီး ဂမူးရှုးထိုးဝင်သွားပါတော့သည်။
အား ဟ…..အင်းအင်း…ဟင်း ရဲမက်သည် သည်တစ်ခါတော့ဖြင့် ညှာတော့ဟန် မပြတော့ပါ၊ သူ.ထိပ်ဖူးကလည်း ခပ်သွက်သွက်ပင် သွင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်း အမှုကိုဆက်ကာဆက်ကာပြုမူနေတော့သည်။ အချက်ပေါင်း ၂၀ ပင်ကျော်သွာပြီထင်၏… ခင်ဖုဏ်း၏တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်သည် မြက်ခင်းထူထူအတွင်းသို. အိကာအိကာ နှင့်ဝင်သွားလေ၏။
နှစ်မငယ်…မောင်ကြီးအရင်းကပ်သည်အထိမြှုပ်လိုက်တော့မယ်နော်… ရော..ခက်ချေပြီ…မဆုံးသေးဘူးလား…. ခင်ဖုဏ်းစိတ်ထဲမှ မေးနေမိ၏။ သူက ခင်ဖုဏ်းအထဲရောက်နေသမျှတန်ဆာကို မျှင်းမျှင်းလေးဆွဲထုတ်ကာ မျှင်းမျှင်းလေးပင်သွင်းလိုက်ပြန်သည်။ ထိုသို. သုံးလေးကြိမ်လုပ်ပြီးသော် အဝသို.တိုင်အောင်ဆွဲနှုတ်ကာ ခေတ်္တမျှနားနေလိုက်၏။ ထို.နောက် ခင်ဖုဏ်း၏ ခါးသိမ်သိမ်လေးကို လက်နှစ်ဖက် ဆုပ်မိလောက်သည်အထိ အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်ကာ သူ.ထိပ်ဖူးကို မြှားတစ်စင်းပြစ်လိုက်သည့်အလား အားကုန်စိုက်ကာနှစ်လိုက်ပါတော့သည်။
ခင်ဖုဏ်း၏ အုံအရင်းနှင့်သူ့အုံအရင်းတို.ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်မိသည့်အချိန်တွင် ရင်ထဲအောင့်သွားကာ မီးပွင့်မတတ်ဖြစ်သွားရချေပြီ။ မယ်မယ်ဖုရား… ဟု ဒုတိယအကြိမ်မြည်တမ်းရပြန်၏။ သူကား အဆုံးတိုင်ဝင်သွားသောမျှားတံကို တစ်ဖန်နှုတ်ကာ တစ်ဖန်စိုက်သည်… တစ်ဖန်စိုက်ကာ တစ်ဖန်နှုတ်သည်။
မောင်ကြီး..မောင်ကြီး… ခင်ဖုဏ်းအင်မတန်မှ နှစ်ခြိုက်ရပါသရှင်… ခပ်သွက်သွက်လေးပြုတော်မူပါ မောင်ကြီးရှင့်… အား..ရှီး…ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်…. ကာမဇော အဟုန်ဖြင့် အားမာန်ပါပါ သံဝါသ ပြုနေသော ရဲမက်တစ်ယောက် ကာမမူး၊ သေရည်မူးနေသည့်ကြားမှပင် ဆတ်ကနဲဖြစ်သွား၏။ ခင်ဖုဏ်း ဆိုပါတကား… ခင်ဖုဏ်း…ခင်ဖုဏ်း…ဟုတ်ပါစ မှန်ပါတယ်…မောင်ကြီး… ထိပ်ထားရဲ.အပျိုတော် ခင်ဖုဏ်းလား နှစ်မငယ်….. ဟုတ်ပါတယ်ရှင်…. ခင်ဖုဏ်း အနေခက်လှပါသရှင်…. ခပ်သွက်သွက်ကလေးသာပြုတော်မူပါ… ဟင်း…အား အား…ကျွတ် ကျွတ်….. ကောင်းလှပါသည် မောင်ကြီးရှင်…. ခင်ဖုဏ်းသည် အသံတုန်တုန်ယင်ယင်လေးဖြင့်တောင်းဆိုမိနေ၏။
မရှက်နိူင်တော့ပါ။ ခင်ဖုဏ်း ရင်ထဲမှာ မီးတောက်နေပြီ… ဗလောင်ဆူကာ နေပြီမဟုတ်ပါလော…ရဲမက်သည် မမျှော်လင့်ဘဲ ထိပ်ထား၏အပျိုတော် ခင်ဖုဏ်းကို ဖဿဖြင့်လွန်ကြူးခွင့်ရသည့်အတွက် စောစောကထက် နှစ်ဆတိုးပျော်မြူးကာ ခင်ဖုဏ်း၏အိထွေး မို.ဖေါင်းသော ရွှေရင်နှစ်မွှာကို ခပ်တင်းတင်းဆွဲကာဖြင့် အားကုန်သွန်ပြီးလှုပ်ရှားလေတော့သည်။ ခင်ဖုဏ်းကလည်း မိုးမမြင် လေမမြင်၊ ရဲမက်ကလည်း ကြယ်မမြင် လမမြင်၊ နှစ်ဦးစလုံး ကိလေသာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းကာ ဘာကိုမှအမှုမထားနိူင်တော့ဘဲ မေထုန်သံဝါသ အမှုကိုအဆုံးစွန်အရည်လျှံသည်အထိ တဝကြီးစားသုံးလိုက်ကြလေသည်။ ခင်ဖုဏ်း သည်သူမအပေါ်တွင် မှေးနေသောကိုယ်လုံးကြီးကိုတွန်းရွှေ.ပါသော်လည်း မရွေ.သဖြင့် ကိုယ်ကိုကြွပါအုန်းရျင့်… ခင်ဖုဏ်း ပင်ပန်းနွမ်းလျလို.ပါ ခဏကြွပါဦးရျင့်… ထိုသို.ဆိုလိုက်မှ ခင်ဖုဏ်း၏ကိုယ်ထက်မှဘေးသို.လှဲချလိုက်လေသည်။
မောင်ကြီးပင်ပန်းသွားပြီထင်ပါ့…. မောင်ကြီးရဲ.အမည်ကို အခွင့်ရရင်သိချင်ပါတယ်… ဗလမင်းထင်…ဟု ရဲမက်ကဆိုလိုက်လေသည်။ ထို.နောက် ဗလမင်းထင်ကအပျိုတော် ခင်ဖုဏ်းကို ပွေ.ထူကာ ပန်းစင်အောက်ရှိ ခုံတန်းပေါ် ခေါ် သွားလေသည်။
သူမ၏စုတ်ပြဲသွားသော အပေါ်ဝတ်ကို ပြန်ဝတ်ပေးပါသော်လည်း ရင်သားနှစ်မွှာကို မလုံခြုံစေတော့ပါ။ နှစ်မငယ်…အရှက်သည်းနေပြီလား… ဟုတ်ပါတယ် မောင်ကြီး… နို. အောက်ဝတ်စကဘယ်မှာပါလိမ့်…. ရှာတွေ.သောအခါ ခင်ဖုဏ်းကို မတ်တပ်ရပ်စေလျက် သူကိုယ်တိုင်ဝတ်ပေးမည်ပြု၏။ မှောင်နေသောည၌ပင် ခင်ဖုဏ်း၏ ဆင်စွယ်ရောင်ပမာ ဖြူအုအု ပေါင်းနှစ်လုံးကား ထွေးထွေးအိအိကြီးထင်နေ၏။
သူက အဝတ်ကိုပြစ်ချပြန်ကာ ခင်ဖုဏ်းကိုပွေ.ပိုက်လိုက်၏။ နှစ်ဦးစလုံးအောက်ပိုင်းဗလာကျင်းလျက်သာရှိနေသေး၏။ သူ၏ထိပ်ဖူးကား တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ခင်ဖုဏ်း၏ပေါင်ရင်းကို ထိကာနေချေပြီ…ခက်ချေပြီကော…. ခင်ဖုဏ်း၏ ပေါင်တံတစ်လျောက်တွင် နှစ်ဦးသားအပျော်ကြူးပြီးအံထွက်ခဲ့သော အရည်တို. ပေပွလျက်ရှိနေသေးလျက်ပင်။ သူက ခင်ဖုဏ်းကို ဖွဖွနမ်းလိုက်ပြန်သည်။ ပြီးသော်အိအိမို.မို. ဖြင့် ကားကားစွင့်ရှိလှသော တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖြစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်ကာ စိတ်ဆန်္ဒမကုန်သေးကြောင်းပြသနေပါသည်။ ခင်ဖုဏ်း စိတ်တွေပြန်လည်နိူးကြား လာရပြီကောရှင်..တဏှာမီးလျှံက ပြန်လည်ထကြွလာချေပြီ။ ခင်ဖုဏ်းကို ပြန်ခွင့်ပြုပါတော့…ဟု ဆိုလိုက်ရသော်လည်း အမှန်မတော့ သူပြုသမျှကိုနုချင်ပါသေးသည်။
အိမ်း….ဟုတ်ပါသကော်….မောင်ကြီးမတရားကျနေပြီ….သို.ပေမဲ့လည်း မပြန်ခင်လေး တစ်ကြိမ်လောက်တော့ လွန်ချင်ပါသေးသည်နှမငယ်… မောင်ကြီးစိတ်တော်မကုန်သေးရင်လည်း ခပ်သွက်သွက်ကလေးသာ လွန်လိုက်ပါတော့… နှစ်မတော်မှာ အချိန်ကိုငဲ့ရသူမို.ပါ….. ခင်ဖုဏ်းပြောပြောဆိုဆို ဗလမင်းထင် ၏လိင်တံထိပ်ဖူးဝကိုကိုယ်တိုင်ကိုင်ကာ သူမ၏ပန်းငုံအဖူးဝနှင့် တေ့ဆိုင်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ဗလမင်းထင်၏ထိပ်ဖုးကား ခင်ဖုဏ်း၏ကိုယ်တွင်းသို. အရှိန်ဖြင့်ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြန်ချေပြီ။ ခင်ဖုဏ်း၏ကိုယ်လုံးလေးသည် ဗလ၏အားပါ လှသော်ပြုချက်ကြောင့် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်ကာနေလေတော့သည်။
အတန်ကြာမျှ မတ်တတ်ရပ်ကာ သံဝါသ ပြုနေကြသော်လည်း ဗလမင်းထင် ကားအဆုံးမသတ်နိူင်သေး… ထို.ကြောင့်ပင် ဗလမင်းထင်သည် ခင်ဖုဏ်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ကျောပေးအနေအထားဖြစ်အောင်ပြုလိုက်လေသည်။ ခင်ဖုဏ်း ကခါးကိုညွှတ်လိုက်ရာ သူမ၏ဖြိုးအိသောဖင်အိုးကြီး နှစ်လုံးမှာမို.ခုန်းကာတက်လာလေသည်။
ဗလသည် ဝင်းမွှတ်နေသော ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ ပြူမို.နုအက်နေသော အရည်ရွှမ်းရွှမ်းပန်းဖူးထဲသို. ထိပ်ဖူးကို အားကုန်ထိုးပြီး နှစ်မြှုပ်လိုက်လေတော့သည်။ ပြီးသော် ခင်ဖုဏ်း၏သွယ်နုသော ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ပြီး အညှာတာမဲ.စွာထင်တိုင်းပြုပါလေတော့သည်။ ခင်ဖုဏ်းလည်းအတိုင်းထက်အလွန် ခံစားနေရပါသည်။ သို.ပေမဲ. ခင်ဖုဏ်းပြောမပြနိူင်လောက်အောင် ကျေနပ်ကာနေ၏။ စိတ်ထဲမှာ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲ၍ မရနိူင်လောက်အောင်ဖြစ်ရပြန်ချေပြီ။ မောင်ကြီး၏လုပ်ဆောင်ချက်များကား အပြီးတိုင်ပြုမူတော့မည့်အလား မနားတမ်းပင်အားပါလှချေ၏၊ လျင်မြန်လွန်းလှချေ၏။
ခင်ဖုဏ်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် သိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ လေဟာနယ်ထဲသို.မျောပါသွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီးနောက် မောင်ကြီးသည်လည်းနွေးထွေးလှသော်ဝတ်ရည်တို.ကို လွှတ်ထုတ်လိုက်လေရာ ခင်ဖုဏ်းလည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးလိုက်ရပြန်လေသည်။ အီဆိမ့်ချိုမြိန်လှပါသည် မောင်ကြီးရှင့်…. ဟုခင်ဖုဏ်းစိတ်တွင်းမှမြည်တမ်းနေမိတော့သည်၊ ပြီးပါပြီ ။
မျက် ရည် တွေ လား ချွေး တွေ လား
ယာ ယီ ခင် ပွန်း